जेष्ठ नागरिकको हितमा लाग्दै चन्द्रकृष्ण कर्माचार्य - Safal Awaj Safal Awaj
जेष्ठ नागरिकको हितमा लाग्दै चन्द्रकृष्ण कर्माचार्य
भाद्र १८ गते २०७८ मा प्रकाशित
उद्यमी चन्द्रकृष्ण कर्माचार्य पोख्रेलीहरूका लागि अपरिचित र नौलो नाम होइन । पोखराको प्रशिद्ध औद्योगिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान ‘कर्माचार्य आयल इण्डष्ट्रि प्रा.लि.’ का अध्यक्ष चन्द्रकृष्ण कर्माचार्य अहिले आफूले प्राप्त गर्ने जेष्ठ नागरिक भत्तालाई सदुपयोग गर्दै एक लाख एक हजारको चन्द्रलक्ष्मी जेष्ठ नागरिक सम्मान÷ पुरस्कार स्थापना गरेर झनै चर्चित बनेका छन् ।
चन्द्रकृष्ण अहिले ७० बर्ष पार हुँदा सरकारले दिएको जेष्ठ नागरिक भत्ता जीवनमा पहिलो पल्ट १२ हजार आठ सय रूपैयाँ बुझ्दा मनमनै सोचे – यो रकम मैले अस्वीकार गर्नु हुँदैन बरु यो रकम जेष्ठ नागरिककै हितमा खर्चनुपर्छ ।
उनले साथीहरूसँग रायसल्लाह लिए । धेरैका सुझाव अनुसार जेष्ठ नागरिकका हकहितमा कलम चलाउने पत्रकारलाई बार्षिक सम्मान गर्ने निर्णय गरे । कर्माचार्यको यस कदमले जेष्ठ नागरिकहरूलाई एउटा मिठो सन्देश दिएको छ । वि.सं. २००७ साल फागुन ४ गते भक्तपुरको ठिमीमा जन्मिएका चन्द्रकृण कर्माचार्यले २०२५-२६ सालमा पोखराको पृथ्वीनारायण कलेजबाट डिप्लोमा गरेका थिए ।
चन्द्रकृष्ण कलेज पढ्दै गर्दा उनका सहपाठी नेपाली काँग्रेसका नेता शोभियतबहादुर अधिकारी भद्रकाली स्कूल पढाउँथे । २०२७÷२८ सालतिर अधिकारी हेटौडामा हुने नेपाल विद्यार्थी संघको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिन जानुपर्ने भएकाले आफ्नो सट्टा विद्यालय पढाइदिन कर्माचार्यसँग आग्रह गरे । त्यस बेला अधिकारी साह्रै अप्ठेरो स्थितिमा थिए । अधिकारीको अनुरोध स्वीकारी कर्माचार्य भद्रकाली स्कूल पुगे । त्यसबेला भद्रकाली स्कूलको हेड्मास्टर पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाट थिए । चन्द्रकृष्णको पढाउने शैली ज्यादै मिठो र लोभलाग्दो हुँदा विद्यार्थीहरू मख्ख पर्थे । हेडसर रानाभाटको आग्रहमा उक्त स्कूलमा चन्द्रकृष्णले करीव ५ बर्ष विताएको पत्तै पाएनन् । पछि चन्द्रकृष्ण सोही विद्यालयको हेडसर भए । उनले बाटुलेचौरको विन्ध्यवासिनी हाइस्कूलमा करीव २ बर्ष पढाए ।
चन्द्रकृष्णका पिता जगतकृष्ण कर्माचार्य व्यापारी भएकाले छोराले जागिर खाएको त्यती मन पराउँदैन थिए । पिता सधंै उद्योग, व्यापारमा लाग्नु पर्छ भनेर जोड दिने गर्दथे । स्कूल छाडेपछि चन्द्रकृष्ण पिताले शुरु गरेको व्यवसायलाई विस्तार गर्न अहोरात्र लागे । पहिला च्याऊच्याऊ उद्योग खोले । काठमाडौं–पोखरा चल्ने बस (व्यवसाय) सञ्चालन गरे । २०३४-३५ सालतिर आफूले बैंकबाट रु. २ लाख ६९ हजार ऋण लिएर वस व्यवसाय शुरु गरेका कर्माचार्य बताउँछन् । चन्द्रकृष्ण पृथ्वीराजमार्ग वस सञ्चालक समितिको कोषाध्यक्ष, सचिव हुँदै अध्यक्ष बने । उनको विशेष पहलमा समितिले पोखरा–विरगंज र पोखरा–काँकडभिता बस सञ्चालन गर्न पहल ग¥यो । पछि कर्माचार्यले गण्डकी आयल मिल खोली कोशेली तेल उत्पादन गर्न शुरु गरे । जसले ग्राहकको मन जित्न सक्यो । अहिले प्लाष्टिक, विस्कुट आदि उद्योगमा थप लगानी गरेका छन् ।
कर्माचार्य लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका संस्थापक अध्यक्ष हुन् भने नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य । थुप्रै सामाथिक संघ संस्थामा संलग्न कर्माचार्य लेखनाथ खानेपानी उपभोक्ता संस्था–४ लेखनाथका अध्यक्ष पनि थिए । उनको नेतृत्वमा लेखनाथका घर–घरमा धारा जडान भए । उनी महेन्द्र मा.वि. नयाँबजारका व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँदा नयाँ भवन थप्न सक्रियतापूर्वक लागे । पोखरा लायन्स क्लवका पूर्व अध्यक्ष कर्माचार्यको सपना छ – पोखरा व्यवस्थित सुविधासम्पन्न जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र खोल्ने । उनी भन्दछन्– परिवार सानो भइसके । छोरा, छोरी सबै विदेशमा छन् । जो स्वदेशमा छन् उनीहरू सबै आ–आफ्नो व्यवसायमा, पेशामा व्यस्त छन् । अव बृद्ध मातापिताको सेवा कसले गरिदिने ?
पिता जगतकृष्ण र माता सानुमायाका जेष्ठ सुपुत्र चन्द्रकृष्णले एस.एल.सी. काठमाडौंबाट पास गरे । पिताजीसँग २०१५-१६ सालतिर पोखरा आएका कर्माचार्यको विवाह २०२५ सालमा लक्ष्मीसुन्दरीसँग भएको थियो । कर्माचार्य दम्पतीका एक सुपुत्र र दुई सुपुत्री छन् । विनम्र स्वभावका उद्योगी कर्माचार्यले विश्वका अमेरिका, युरोप, जापान लगायत ११ प्रमुख राष्ट्रको भ्रमण गरिसकेका छन् । कर्माचार्य डेनमार्कमा भएको कृषि मेलामा समेत सहभागि भएका थिए । समाजसेवी कर्माचार्य अन्नपूर्ण एफ.एमले लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित छन् । वरिष्ठ समाजसेवी चन्द्रकृष्णका अनुसार बुबा जगतकृष्ण आफ्ना साथीहरूसँग मिलेर पूर्वतिर व्यापार गर्ने गर्दथे । उनीहरूलाई लागेछ कति पूर्वतिरमात्र जाने पश्चिम तिर पनि जाउँ ।
जगतकृष्णको टोली पहिला त्रिशुली पुगे । त्यसपछि पोखरा आइपुगे । पोखराको सौन्दर्यले जगतकृष्णलाई लोभ्यायो र परिवारलाई पोखरा झिकाए । अनि यहीनै स्थायी बसोबास गरे । कर्माचार्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिका कार्य समितिका सदस्यका रूपमा आफ्नो भूमिका निभाएका छन् भने नेवाः खल भवन निर्माण समितिको सदस्य पनि थिए । पोखरा वडा नं. ९ का पूर्व वडा अध्यक्ष कर्माचार्य नेपाल चामल, तेल तथा दाल उद्योग संघ, राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी उपभोक्त महासंघका महासचिव, सुशासनका लागि नागरिक समाज, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका उपाध्यक्ष कर्माचार्य लेखनाथ विकास समाजका अध्यक्ष पनि थिए । चन्द्रकृष्ण महेन्द्रनारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठान पोखराका अध्यक्ष समेत हुन् ।